Bogga ugu weyn 15 Software -ka Podcasting -ka ugu Fiican ee ugu Fiican, Madal, iyo Codsiyada Sanadka 2022 -ka
Waxaa jira softiweer aad u badan oo lacag la'aan ah, aalado, iyo codsiyo la heli karo maanta. Muddo sanado ah, waxaa laga yaabaa inaan marmar dhagaysanno ama aragno qof sidaas samaynaya, oo leh feejignaan aad u weyn oo aan la yaabnay waxa socda. Hagaag, maanta, caan -ka -noqoshada podcasting ayaa ujeedadeedu ahayd saqafka kore.
Si ka duwan sida baloogyada iyo xayeysiisyada fiidiyaha, waxay ka fogeysaa dhinaca muuqaalka waxayna qabataa dhinaca maqalka ee isgaarsiinta aadanaha. Tani waxay ka dhigaysaa mid si fudud loo heli karo oo laga yaabo inaad ku lug yeelato xitaa marka aad hawlo badan qabato.
According to Podcast insight, as of January 2022, there were over 850,000 active podcasts and more than 30 million podcast episodes. This is a pretty startling growth, considering there were just 500,000 active podcasts from just two years ago in February 2018.
Tirakoobyadan podcast -ka ayaa gabi ahaanba waafaqsan xaqiiqda ah in baloogyada si tartiib tartiib ah u socdaan. Xaqiiqdii, waxaa lagu qiyaasay in boqolkiiba 70 dadka Mareykanka ay hadda ka warqabaan waxa podcast -ka yahay - boqolkiiba 64 sanadka 2018.
Intaas oo keliya maahee, marka laga reebo xoogaa hoos u dhac ah 2013, tirada dhagaystayaasha podcast -ka ee Mareykanka ayaa aad u kordhaysay in ka badan toban sano.
Sahankii ugu dambeeyay ee la sameeyay sannadka 2019 ayaa lagu ogaaday in in ka badan kala bar (51 boqolkiiba, si sax ah) macaamiisha ka weyn 12 sano ee Mareykanka ay dhagaystaan ​​codadka (Statista, 2019). Taasi waa boodh aad u weyn oo ka yimid 44 boqolkiiba diiwaangashan 2018, taas oo ah kororka ugu weyn (marka la eego dhibcaha boqolleyda) laga soo bilaabo muddadii 13 sano ahayd 2006 ilaa 2019. Tani waxay sidoo kale ka badan tahay labanlaab tirada dhagaystayaasha muuqaalka (22 boqolkiiba) waxaa jiray toban sano ka hor 2009kii.
Marka laga soo tago kororka dhegeystayaasha joogtada ah, tirakoobyadan dhegeystaha podcast -ka ayaa sidoo kale muujinaya in tiro sii kordheysa oo dadweyne Mareykan ah ay siinayaan sawir -qaadis: 51 boqolkiiba guud ahaan dadweynaha Mareykanka ayaa si toos ah ugu dhagaystay podcast -ka ugu yaraan hal mar, boqolkiiba toddoba dhibic ka kordhay 44 boqolkiiba ayaa la diiwaangeliyay 2018.
Waxaa la yiri, podcasts -ka waxaa lagu diyaariyey softiweer badan, codsiyo waana la martigeliyay.
Intii aan ku siineynay soo koobid, waxaan sidoo kale ku siin doonnaa xiriiriyeyaasha si aad u gasho software -kan.
Waa Maxay Podcast?
Muxuu Sameeyaa Barnaamijka Podcast -ka?
Waa imisa Qiimaha Podcast -ka?
Podcast Software tafatirka
Farshaxanka La Habeeyey
Marti gelinta Podcast
Sidee Podcastters -ku Lacag u Helaan?
2. Taageero toos ah
3. Iibinta Iibsiga
4. Badeecooyin Dhamaystiran
7. Macquulka ah Pro X
8. Wax goosan
11. Hab -raac
12. Studio kow 5
Wax kasta oo ay mudan tahay, podcast -ku waa maqal dhijitaal ah ama fayl fiidiyow ah oo laga diyaariyey internetka si loogu soo dejiyo kombiyuutar ama aaladda gacanta. Caadi ahaan loo heli karo taxane ahaan, qaybinta cusub waxaa si otomaatig ah u heli kara macaamiisha.
Sidoo kale marka loo eego wikipedia.com.
Qodob kale oo xusid mudan ayaa ah in podcast -ku uu daboolo mowduucyo kala duwan oo ka kooban caafimaadka, siyaasadda, baaskiilka, iyo xitaa qaab nololeedka shaqsiyeed. Waxay la mid tahay dhinaca maqalka ee taxanaha filimada oo aad ka heli karto khadka tooska ah, ama sheekaysiga raadiyaha duuban.
Sida podcast -ku u shaqeeyo, waxaad u baahan tahay asal ahaan, waa aalad, marin u helka internetka, iyo dabcan goobta aad rabto inaad ka hesho podcast -ka oo aad ku fiicantahay inaad tagto. Habraacyaduna waxay la mid yihiin ka soo dejinta faylka maqalka ee shabakadda.
In kasta oo la mid ah faylasha maqalka, farqigu wuxuu yimaadaa markaad ku darto ikhtiyaarka inaad iska qorto taxanahaas faylasha maqalka ah. Mawduucyada baaxadda leh ee ay daboolayso awgeed, ma aha dhacdo cusub in ay u adeegto sidii hab kor loogu qaadayo sumcadda, taas oo lagu gaari karo wadahadalo goos goos ah iyo wadahadalo hordhac ah oo kooban kahor bandhigga hadalka ugu weyn.
Podcasting -ku wuxuu noqday ganacsi weyn, kaasoo u abuuri kara dakhli cusub adiga iyo meheraddaada iibinta xayeysiiska, kafaala -qaadka, ama xitaa soo saarista tilmaamaha iyo wadidda iibinta tooska ah ee badeecadda ama adeegga shirkaddaada.
Si kastaba ha noqotee, si aad u bilowdo taxane podcast waxaad u baahan tahay inaad haysato softiweer Podcast wanaagsan iyo codsiyo gacantaada ah si aad u gasho miinada podcast -ka iyo dhammaan wanaagga ay leedahay inay bixiso.
Software -ka Podcast waa aaladda softiweerka ee fududeysa sameynta podcast laga bilaabo duubista iyo ilaa hoos loogu riixo internetka.
Qeexitaanka kor ku xusan, waxaan dhihi karnaa software -ka podcast -ku wuxuu ku kala duwan yahay software -ka duubista codka ilaa software -ka tafatirka maqalka. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah softiweerka tafatirka maqalka ayaa sidoo kale la socda aalad ku dhex jirta oo kaa caawineysa inaad bilowdo podcast-gaaga goobaha martigelinta.
Sida waxyaabaha badankood, qiimaha samaynta waxyaabaha qaarkood waxay ku xiran tahay waxaad rabto ama waxaad rabto inaad sameyso.
Asal ahaan, martigelinta podcast -ku waxay u dhexayn kartaa dhowr boqol oo doolar ilaa kun doollar.
Si kastaba ha noqotee, kuwani waa waxyaabaha aasaasiga ah ee aad u baahan tahay oo kuwan, waxaad ku qiimeyn kartaa qiimaha kuwan waa:
Kani waa qalabka ugu aasaasiga ah ee kaabayaasha podcast -kaaga. Waxaad u baahan doontaa kombiyuutar si aad u sii wadato, hase yeeshe, caqabaddan ayaa loo arkaa inay xallisay haddii aad hore u haysatay mid. Haddii kale, markaa waxaad heli kartaa kombiyuutar la qaadan karo ugu yaraan $ 300 illaa $ 1500 taas oo ku xidhan xajmiga jeebkaaga.
Meesha tani aysan suurtogal ahayn, waxaad ka raadin kartaa maktabadaha maxalliga ah ee agagaarkaaga leh istuudiyaha cod-bixinta oo u baahan calaamad kaliya ama mararka qaarkood laga yaabo inay kiro-la'aan tahay, waxay u baahan kartaa inaad u baahan tahay aqoonsi in laguu oggolaado.
Qalabkani wuxuu u badan yahay inuu ku yimaado kombuyuutarkaaga, si aad dhab ahaantii u bilaabi karto mid la'aan.
Si kastaba ha ahaatee, hoos u dhaca tan ayaa ah in inta badan, makarafoonka kombiyuutarkaagu uusan soo saarin dhawaaq tayo leh. Oo waxaa laga yaabaa inaad u soo iibsato makarafoon tayo leh oo loogu talagalay podcast -kaaga.
Samsung Q2U waa $ 59.99 oo kaliya waana makarafoon bilow ah oo weyn. Waxa kale oo aad heli kartaa makarafoonno heer sare ah oo leh astaamo badan oo qiimihiisu yahay $ 400 ama ka badan.
Ikhtiyaar kale ayaa ah in la fiiriyo makarafoonnada si tartiib ah loo isticmaalay oo dib loo hagaajiyay ee iibka ah. Ma ogtahay in marka alaabta lagu celiyo Amazon aan mar labaad la iibin karin? Xataa marka wax ka khaldan yihiin badeecada, dib uma xirmi karaan oo uma iibin karaan shay cusub. Taasi waa meesha aad ka heli karto heshiisyo la yaab leh oo ku saabsan walxaha “sida-cusub”!
Xusuusin: Haddii aad dooratid inaad iibsato wax dib loo soo celiyay, ama haddii aad dooratid alaab si tartiib ah loo isticmaalay ama dib loo hagaajiyay, hubi inaad hubiso siyaasadda soo -celinta ee tafaariiqlaha si aad naftaada u badbaadiso.
Waxaad u baahan doontaa barnaamij tafatir maqal ah si aad u duubto una tafatirto podcast -kaaga. Nasiib wanaag, waxaad ka heli kartaa softiweer tayo sare leh oo waliba dhaca inuu lacag la'aan yahay.
Dhinacan, waxaan ku siin lahayn qoraal kooban oo faahfaahsan iyo xiriiriyeyaasha si aad u hesho.
Si kastaba ha noqotee, waxay kuxirantahay baahiyahaaga tafatirka podcast -ka, waxaa sidoo kale jira dhowr ikhtiyaar software oo lacag ah. Qaarkood waxay ku kacayaan ugu yaraan $ 9 bishii, halka kuwa kalena ay ku iibsadaan $ 500 hal mar oo wax lagu iibsado. Laakiin waad ka gudbi kartaa kuwa xorta ah.
Mar kasta oo aad rabto inaad iibsato softiweer, had iyo jeer waa fikrad wanaagsan inaad akhrido faallooyinka oo aad fiirsato casharrada ku saabsan sida loo isticmaalo badeecada kahor. Sababta tan ayaa ah in la barto cilladaha wax soo saarka oo dhan iyo in la go'aamiyo sida ay u fududahay ama u adag tahay in la isticmaalo softiweerka ka hor intaadan gadan.
XIDHIIDHKA: Mushahar ku hel si aad dadka ula socoto Instagram-ka sanadka 2022 | Samee In ka badan $ 100/Bishii
Taleefan-gacmeedku wuxuu kaa caawinayaa helitaanka duubista ugu cad ee suurtagalka ah, iyadoo lammaaneyaasha hoose ay ku kacayaan qiyaastii $ 70 iyo dhagaha dhagaha ee sare oo ku ordaya $ 500. Duubista ugu cad waxay u badan tahay inay dhagaystayaashaadu ku soo noqdaan wax badan.
Waxaad sidoo kale u baahan doontaa thumbnail si ay ula socoto duubistaada, taas oo u noqon doonta iftiin si aad uga farxiso dhagaystayaashaada markaad calaamadeynayso astaantaada. Waxaad kaydsan kartaa lacag haddii aad hore u taqaan sida loo sameeyo naqshad ama aad leedahay saaxiib kaa caawin kara. Sidoo kale, waxaad isticmaali kartaa goobo lacag la'aan ah oo bixiya qaab -dhismeedyada sida Canva
Waxaad u baahan doontaa goob aa si aad u martigeliso podcast -kaaga, oo aad ugu eg meel aad ku noolaato.
In kasta oo laga yaabo inaad go'aansato inaad martigeliso podcast -ka websaydkaaga haddii aad mid leedahay, tani runtii maahan fikrad wanaagsan, maxaa yeelay haddii ay jiraan waxyaabo badan oo laga soo dejisto websaydhkaaga, waxay yareyn kartaa degelkaaga oo aan ahayn wax wanaagsan bilowga -oo Taasi waa meesha marti -geliye podcast lagu kalsoon yahay uu soo galo.
Martigeliyuhu wuxuu kaydiyaa podcast -kaaga sidoo kale wuxuu u qaybiyaa aagag badan oo dadku ka helaan podcasts. Tani waa baahi aad u daran, maadaama aad rabto in dhagaystayaashaadu ku helaan si kasta oo ay doortaan inay dhegaystaan.
Intee in le'eg ayay kharashaadka bilowga podcast -ku noqon doonaan, runtii adiga ayay kugu xidhan tahay.
Ka dibna fikradda macaashka ayaa soo galaysa.
Tani sidoo kale waa su'aal ku jirta bushimaha kuwa wax ka beddeli kara.
Dhab ahaantii, podcasters -ka farsamo ahaan waxay kasbadaan 0 $. Oo haddii ay suurtogal tahay inaad raadineyso soo -celin degdeg ah ama lacag -bixin taxanahaaga podcast -ka ah, markaa gabal talo saaxiibtinimo ah ayaa ah inaad meel kale eegto sidaad marka hore u gelin lahayd lacag ka badan intaad ka bixin lahayd.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad sugi karto, soo bandhigto waxyaabo qaali ah oo aad samayso allabaryada loo baahan yahay, markaa waxay kuu soo celin doontaa soo -celin badan.
Hababka ay adeegsadayaasha cod -bixiyayaashu ku kasbadaan lacag inkasta oo aysan ku salaysnayn si gaar ah oo aan lahayn amar gaar ah, ayaa loo qaybin karaa:
Taageero toos ah
Inta badan, markaad dhegeysanayso podcast, waxaad maqleysaa martigeliyaha aad jeceshahay oo xusaya kafaala -qaadkooda dhowr jeer inta lagu jiro bandhigga, oo waliba xayeysiiya hannaanka. Tani waa siyaabaha ugu badan ee ay adeegsadayaasha cod -bixiyayaashu ku kasbadaan lacagtooda. Runtu waxay tahay in uu yahay kafaala -qaadaha fududeeyay lacagaha taxanahaas gaarka ah.
Qaddarka aad ka kasbato kafaala -qaadayaasha, waxay kuxirantahay tirada jeer ee dhacdooyinkaaga la soo dejisto.
Oo kafaala -qaadeyaashu waxay ku bixiyaan kharash halkii mille. In kasta oo qiimayaashani ay u dhexeeyaan $ 18 illaa $ 50 kharashkii mille, haddana waa celcelis, maxaa yeelay podcasts aad u caan ah ayaa ka badan kara.
Iyada oo ku xidhan meesha xayeysiiska la dhigay, waxaad ku qiimayn kartaa xayeysiisyadaada si ka duwan. Xayeysiisyada duudduuban ee duudduuban waxay socdaan bilowga bandhigga, badiyaa qiyaastii 15-30 ilbidhiqsi, xayeysiisyada duubista dhexe ayaa aad u qiimo badan maxaa yeelay dhagaystayaashu wakhtigaas aad bay u feejignaadaan. Xayeysiisyada duubista dabadeed waxay socdaan dhammaadka bandhigga, sidoo kale 15-30 ilbidhiqsi. Waxay la mid yihiin kuwa xayeysiiya.
Waxaa xusid mudan inaadan bilaabin inaad hesho heeso xayeysiis ah oo ku saabsan taxanahaaga podcast -ka, laakiin markaad hesho dhagaystayaal ku filan iyada oo loo sii marayo nuxurka qaaliga ah, waxay xaqiiqdii bilaabi doonaan inay dhex galaan.
Si fudud haddii loo dhigo, kaalmada tooska ah waa marka aad si toos ah u weydiisato taageero dhaqaale dhagaystayaashaada.
Haddii aad tahay soo -jeediyaha leh shaqsiyad la jecel yahay oo ka kooban waxyaabo hodan ah, marar badan waxaad yeelan doontaa dad si fudud lacag kuugu soo diri doona si aad u sii wadato soo saarista cod -baahiyaha si aad u maaweeliso.
Waa mid ka mid ah hababka lagu taliyey ee ururinta lacagaha iyo raasumaalka si aad taxanahaaga u sii wadato.
Tan waxaad ku gaari kartaa adoo ku daraya badhanka lacag -bixinta, furitaanka koonto xarig, ku dar foomka deeq -bixinta goobtaada ama si ka sii wanaagsan oo weli abuuraya koonto Patreon, adiga oo sharraxaya sababta aad ugu qalantay deeqda.
Sida laga soo xigtay castos.com,
“Habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo dhagaystayaashaada inay ku taageeraan waa inaad ku magdhowdo waxyaabo qiimo sare leh. Waxaad ku dallaci kartaa gelitaanka hore ee dhacdooyinka, dhacdooyinka gunnada, ilaha la soo dejisan karo, sheekaysiga tooska ah, ama helitaanka wargeysyada iyo kooxaha Facebook. ”
La mid ah kafaala -qaadka, halkii lagu siin lahaa hoos
Iibinta iskaashatadu waxay la mid tahay kafaala -qaadaha, laakiin halkii aad ku bixin lahayd tirada soo dejinta, waxaa lagu siinayaa lacag ku saleysan waxaad ka iibiso shirkad kale. Si kale haddii loo dhigo, waxaad ku helaysaa lacag ku saleysan guddi iib kasta.
Qaar ka mid ah codsiyada iyo softwares sida Audible. waxay bixiyaan barnaamijyo ku -meel -gaadh ah oo bixiya isku -xidh khaas ah si kor loogu qaado xayaysiis ama kafaala -qaade. Marka qof adeegsado iskuxirkaaga, waxaad u heleysaa sumcad iibinta oo waxaad kasbataa $ 15.
Hab kale oo caadi ah oo lagu abuurayo podcast -ka ayaa ah in la iibiyo badeecadaha kaabayaasha ah. Kuwani waxay ku imaan karaan qaab baayacmushtar, koorsooyin, adeegyo la -talin, buugaag, ama helitaanka dhacdooyinka nool.
Shaki kuma jiro in kafaala -qaadayaasha podcast -ku ay yihiin habka ugu macaashka badan bandhigyada lacag lagu sameeyo. Waxay sidoo kale ka mid yihiin ilaha dakhli ee ugu fudud marka aad dhammaystirto heshiiska kafaalaqaadaha. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ku aqriso xayeysiisyadaada duubista podcast -ka sida waafaqsan heshiiskaaga.
Sida laga soo xigtay IAB iyo PwC, xayeysiiyayaashu waxay kharash gareeyeen $ 678 milyan sanadka 2019 waxayna ku bixin doonaan wax kabadan hal bilyan sanadka 2020.
IAB iyo PwC saadaalinta xayeysiiska podcast -ka ayaa dhaafi doona $ 1 bilyan marka la gaaro 2020.
Sidii hore loo ballanqaaday, waxaan ku siin doonnaa softwares -yada, aaladaha iyo codsiyada 15 -ka ugu sarreeya ee bilaashka ah ee 2022 -ka.
Waxaa jira softiweerro kala duwan, aalado, iyo codsiyo loogu talagalay in Podcasts laga helo internetka maanta. Waxaan ku qaadan doonnaa iyaga inta aan taxayno astaamahooda hawsha sidoo kale waxaan ku siinaynaa xiriirro meesha aad si fudud uga heli karto.
Waa kuwan 15 -ka software ee ugu fiican duubista, tafatirka, iyo ciyaarista podcasts.
Macquul ah x.
Qorshaynta iyo jadwalka software -ka
Si tartiib ah.
Studio 5 XNUMX.
Meelaha martigelinta ee Podcast.
Garageband waa badeecad ka timid Apple oo laga heli karo Appstore. Software-kan oo qiyaastii ah hal gigabyte wuxuu la imaanayaa maktabad horay loo sii rakibay, taas oo aad ku dari karto oo wax ka beddeli karto xawaaraha iyo kala-guurka duubistaada.
Dhan ahaan, waxay taageertaa luqado badan iyo qaabab maqal ah. Waana lacag la'aan.
Astaamaha Muhiimka ah waxaa ka mid ah:
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad abuurto oo ku keydiso raadadka aaladaha IoS ee u dhexeeya,
Waxaad abuurkaaga kula wadaagi kartaa emayl ama shabakadaha bulshada
TALO-TALO: Si aan kala go 'lahayn ayuu ugu shaqeeyaa nidaamyada Mac 10.13.6 iyo wixii ka sareeya.
Waxaad ka heli kartaa xiriirkan:
Istuudiyaha duubista maqalka ee il-furan oo ay abuureen koox mutadawiciin mutadawiciin ah. Audacity waxay leedahay astaan ​​saaxiibtinimo leh oo dhinacyo badan leh, waxaa loo adeegsan karaa mac, daaqad iyo nidaamyada hawlgalka ku saleysan Linux.
Audacity waxay leedahay 100 milyan oo la soo degsado laga bilaabo Oktoobar 2020! Waxaad duubi kartaa maqalka tooska ah, soo dejin kartaa, oo tafatiri kartaa feylasha codka, iyo dib -u -habeynta fadhiyada.
Wuxuu ku siinayaa qaab muuqaal Spectrogram ah,
Duubista iyo dib u ciyaarida dhawaaqyada
Xoqidda (Nooca 2.1.1 iyo ka dib)
Diiwaanka Waqtiga  wuxuu awood u siinayaa adeegsadaha inuu jadwal u sameeyo marka duubistu bilaabato oo ay dhammaato si uu u sameeyo duubis aan lala socon.
Dib -u -ciyaarista MIDI waa la heli karaa (laga bilaabo nooca 2.2.0 iyo wixii ka dambeeya)
Duubista Punch iyo Roll-si loogu habeeyo duullimaadka (laga bilaabo nooca 2.3.0 iyo wixii ka dambeeya)
zoom iyo tafatir hal-waddo ah, Muraayad mashruuc iyo mashruuc XY-guuritaan, wax-yeelayn aan-burburin iyo wax-burburin, maaraynta faylka maqalka (gooyn, nuqul, dhejin)
Isbeddellada saxda ah ee xawaaraha maqalka (ku -meelgaarka) inta aad ilaalinayso garoonka si aad ugu waafajiso fiidiyaha ama aad u maamusho waqti hore loo cayimay
XIDHIIDHKA: 10 Xeelado Cusub si aad Instagram -ka ugu hesho 10,000 oo Ruux 2022 -ka
Hawl-galka madal-Audacity wuxuu ka shaqeeyaa Windows, macOS, iyo nidaamyada kale ee Unix (oo ay ku jiraan Linux iyo BSD)
Halkaan ka soo qaado:
Software -kani wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka ah inaad abuurto podcast ama dhageysiga mid hore u jiray. Kani sidoo kale waa kanaal la hubo oo lacag lagu kasbado codadkaaga.
Waxay leedahay nooca softiweerka iyo codsiyada mobilada ee la jaan qaada taleefannada casriga ah, halkaas oo aad ku abuuri karto midkood desktop -ka ee barnaamijyada moobiilka adiga oo soo dejinaya ama sameeya rikoodh toos ah ka dibna u soo dhoofiya afhayeenkaaga. Oo weliba waa Android, Mac, iOS, iyo webka-ku-saleysan ee ku habboon.
Waa softiweer la socda xirmo bilaash ah iyo xirmo lacag leh. Xirmooyinka la bixiyay waa Anchorman, idaacadda, iyo hibada hawada, waxayna ku kacday USD 45, 18, iyo 6 siday u kala horreeyaan.
Astaamaha ugu muhiimsan waxaa kamid ah:
Waxay kaydinaysaa si otomaatig ah sida qabyada
wuxuu si toos ah iskugu daraa Skype -ka console.
Waxay leedahay astaamaha jiidista iyo hoos udhaca, taas oo kuu oggolaanaysa inaad ku jiido heesaha, saamaynta codka maqalka raadiyaha ee barnaamijka.
Si aad u hesho software -ka ama macluumaad dheeri ah, guji xiriirinta:
Kani waa softiweer hagaajin maqal oo kaa caawinaya inaad dhammaystirto fiidiyahaaga kahor intaan la martigelin.
Auphonic waxay taageertaa qaabab badan oo faylal caadi ah. Asal ahaan, Auphonic ayaa aad ugu habboon software tafatirka
Waxa kale oo ay ku siinaysaa 2 saacadood oo hab maqal ah bil kasta oo bilaash ah.
Laakiin Haddii aad u baahan tahay waqti dheeri ah oo wax-qabad, waxaad iska qori kartaa qorshahooda is-qoritaanka oo la yiraahdo "Soo-noqnoqoshada Dhibcaha" ama iibso "Hal-mar Hal-mar,".
Software -kani wuxuu ku habboon yahay tifaftiraha codka android iyo duubista macruufka
Tilmaamo Muhiimka ah:
Leveler dhawaaq caqli badan
Soo celinta Codkii
buuqa otomaatiga ah iyo yareynta hum, shaandhaynta jadwalka hoose ee aan la rabin
Aqoonsiga Hadalka iyo Tifaftiraha Qoraalka
Cod -siinta ugu Fiican, Metadata iyo Calaamadaha Cutubka
Podcasts la xoojiyay, cutubyada MP4, ID3 (MP3) iyo Vorbis
Socodka Shaqada Fiidiyowga iyo Barnaamijyada Maqalka
Hawlgalinta Macluumaadka Tooska ah
Dropbox, (S) FTP, HTTP, Google Drive, iyo Kaydinta Daruuraha, WebDAV, (Amazon) S3, YouTube, Facebook, SoundCloud, Spreak
waxaa halkan ka heli
Sidoo kale fiiri: Sida Lacag Looga Sameeyo Snapchat | 10 Siyaabaha Sharciga ah
Kani waa software duubitaan podcast-ku-saleysan oo kaa caawinaya sameynta dukumiintiyo maqal oo tayo leh biraawsarka shabakadda. Qalabkani uma baahna barnaamijyo dhinac saddexaad ah sida Skype, zoom ama hangout maadaama uu codkiisa u adeegsado adeegyada IP-ga. Waxay sidoo kale ku siineysaa fursad aad ku duubto dadka kale oo aad ku hadasho, taas oo ay ugu wacan tahay is -dhexgalka daruuraha. Faa'iido kale oo ku jirta aaladdan ayaa ah inay ku duubto duubistaada sanduuqa sanduuqaaga ama wadista Google inta aad si otomaatig ah u kaydinayso.
Intaa waxaa dheer, maadaama ay tahay aalad podcasting-ku-saleysan shabakadda, uma baahnid inaad sameyso wax soo dejin ah si aad u hesho. Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso waa sameynta koonto, waadna ku fiicantahay inaad tagto!
Waxay leedahay qorshe lacag la'aan ah ilaa 2 marti iyo 8 saacadood oo duubitaan ah bishii. Si kastaba ha ahaatee waxaa jira lacag dhan $ 20/bishii dadka doonaya in ay bilaabaan adeegsiga xirfadeed taas oo ka dambaysa tijaabo lacag la'aan ah oo 14 maalmood ah.
Tilmaamo Its ka mid ah:
Interfiyuugga user friendly
Dhex-dhexaad ah Codka ka badan Protocol-ka Internetka
Waxay ku duubtaa maqalka 16-bit 44.1k WAV oo aan khasaare lahayn. Taasoo micnaheedu yahay in faylka aan la cadaadin, oo uusan dabcin dabeecaddiisii ​​hore.
Kaydinta daruuraha ku salaysan (adiga oo adeegsanaya sanduuqaaga ama Google drive)
Si otomaatig ah ayuu u raraa raadka maqalka.
Adeegso iskuxirkan si aad u bilowdo podcasting:
Hindenburg Journalist waa tifaftiraha maqalka badan oo loo sameeyay podcasters, soo saarayaasha maqalka iyo saxafiyiinta raadiyaha.
Naqshadeynta iyo sifooyinka waxaa loogu talagalay wax-soo-saarka hadalka. Guud ahaan waxay aad ugu habboon tahay sheeko-sheegidda iyo wareysiyada.
Waxay asal ahaan kuu oggolaaneysaa inaad ku duubto makarafoon, jiido oo aad ku rido faylasha maqalka softiweerka si aad u bilowdo shaqada. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa wadooyin badan inta aad rabto.
Inta lagu jiro waraysiga waxaad samayn kartaa calaamado iyo ku dari kartaa qoraallo. Intaad ku jirto, waxay u isticmaashaa jaangooyooyinka dhawaq ee ugu dambeeyay dejinta heerarka. Tani waxay kuu fududeyneysaa inaad dejiso heerar sax ah waxayna ku badbaadineysaa waqti badan.
Waxa kale oo aad ku habayn kartaa shaqadaada adiga oo kaashanaya guddi -goobeed gaar ah.
waxaa loo isticmaali karaa labadaba Windows 10 & aaladaha Apple
Geedi aan wax burburin
Wax isbeddel ah kuma sameeyo faylasha maqalka asalka ah
Heerarka otomaatiga ah
Heerarka ayaa lagu dejiyay maqalka la soo waarido iyadoo la adeegsanayo codka sare ee EBU R128.
Auto EQ dhawaaqa codka “hawada”
Software -kani si kastaba ha ahaatee maahan lacag la’aan maadaama ay ku timaaddo heerka $ 95 kaas oo ay ka horeyso soddon maalmood oo tijaabo lacag la’aan ah. Ugu yaraan taasi waa inay ahaataa waqti kugu filan si aad uga fikirto inaad iibsato iyo haddii kale.
Kani waa Goobta Shaqada Dijital ah ee Dijital ah (DAW) oo ka socota saldhigyada Apple. Tan waxaa loo sameeyay dadka isticmaala mac. Inta badan, waxaa marar badan lagu tilmaamaa inuu yahay walaalka weyn ee Garageband.
Qalabkan ayaa asal ahaan loo sameeyay tafatirka maqalka iyo isku darka.
Iyada oo leh daaqad isticmaale si sahlan loo adeegsan karo, oo waliba la socota badhanka caawinta deg-degga ah, laguma buuxin karo astaamaheeda.
Si dhaqso leh oo leh jiirka ayaa magaceeda iyo shaqadeeda kor u qaadi doonta.
Waxay ka kooban tahay sifooyinka soo socda:
nidaam-shaqo-raad-raaca maqal oo adag, iyo midi dareen leh iyo qayb ku-saleysan muunad.
waafaqsanaanta plugins -ka dibadda iyo VST -yada.
Qalabka MIDI ee ballaaran baa la heli karaa
dhibcaha iyo shaqaynta tafatirka sare
Ka hel xiriirkan:
Astaamahan oo dhan iyo in ka badan ma aha kuwo raqiis ah, maadaama Logic Pro X uu la yimaado qiimo iibsi hal mar ah oo ah $ 200. Si kastaba ha noqotee, waxay la timaadaa tijaabo 90 maalmood ah, taas oo ah in ka badan waqti kugu filan si aad u baratid aaladda oo aad u go'aansato qiimaheeda.
Soo gaabinta Deegaanka Degdega ah ee Soosaarka Maqalka, Injineerinka, iyo Duubista
Barnaamijkan DAW ee awoodda badan ee fudud ayaa loo heli karaa daaqadaha, mac os iyo nidaamyada Linux.
Waxay kaaga baahan tahay inaad ku iibsato liisan si kale si aad u isticmaasho, in kasta oo ay ku siinayso muddo 60day evalution ka hor intaadan bixin. Ruqsadaha ayaa ah laba nooc, adeegsi shaqsiyeed oo qiimihiisu yahay $ 60 iyo shatiga ganacsiga oo ku kacaya $ 225.
Iyada oo leh astaamaha qaarkood sida:
Gelinta Dheeraadka: Ku dheji qaybo yaryar oo qaar ka mid ah furayaasha koontaroolka raadadkaaga iyo guddiyada isku darka, oo ay ku jiraan ReaEQ, ReaFIR, ReaXcomp, garaafyada JSFX garaafyada, iyo in ka badan MIDI
Baqshadaha CC: U maaree xogta MIDI CC sida baqshado xog joogto ah, halkii ay ka ahaan lahaayeen dhacdooyin kala duwan; abuuraan sheekooyin siman, muusig iyo saamayn
Timebase: Si otomaatig ah u fidin oo dib u habeyn maqalka ku saabsan isbeddelada ku -meelgaarka ee adag; si fudud ula shaqee duubista ku-meelgaarka ah iyo cajaladaha si toos ah loo wada ciyaaro
Jaantuska: Arag oo wax ka beddel waddada mashruuca iyadoo la adeegsanayo ku-dayashada garaafka ee patchbay-ga oo heer sare ah
Retina/HiDPI: Si otomaatig ah u siinta bandhigyada HiDPI iyo Retina; mawduuca cusub ee 6 Default wuxuu taageeraa 100%, 150% iyo 200% asal ahaanBig
Hagaajinta Mashruuca: Dabeecadda sida aadka ah loo hagaajiyay ee mashaariicda leh (200+) tirinta track; Taageerada muujinta biraha ee sawirrada shaashadda oo aad u dhaqso badan shaashadaha cusub ee macOS.
waxay awood u leedahay inay ku siiso khibrad duubis iyo tafatir aan kala go 'lahayn.
REAPER kuma jiraan softiweer dhinac saddexaad ah, in kasta oo uu si buuxda ula jaan qaadayo dhammaan noocyada heerka VST (oo hadda ah VST3) sidaas darteedna wuxuu la shaqeeyaa inta badan labadaba pluginsyada xorta ah iyo kuwa ganacsi ee la heli karo. REAPER x64 ayaa sidoo kale maamuli kara 32-bit plug-ins oo ay weheliyaan hababka 64-bit. Laga soo bilaabo nooca 5.97, REAPER wuxuu taageeraa ARA 2 plugins.
Qorshaynta iyo jadwalka softwares -ka: softwares -kan ayaa kaa caawinaya abaabulka iyo qorshaynta abaabulka taxanahaaga iyo meheradahaaga xulafada ah, kuwaas oo kaa caawinaya kor u qaadista hufnaantaada iyo sumaddaada si aan yareyn. waxaa ka mid ah:
Fikraddu waa madal leh taageerid calaamadaynta oo la beddelay oo adeegsata guddiyada kanban, hawlo, wikis, iyo xog -ururin. waa goob shaqo oo dhan-hal ah oo loogu talagalay qorista, aqoonta iyo maaraynta xogta, iyo maaraynta mashruuca iyo hawsha. Tilmaanta maareynta mashruuca ayaa kaa caawineysa inaad la socoto howlahaaga oo aad ku sameysay goobteeda midaysan. Ka sokow inuu la jaanqaadi karo barnaamijyada isweydaarsiga, waxaa laga heli karaa inta badan daalacashada shabakadda. Waxaa ku jira aalad loogu talagay “ka -goynta” mareegaha bogagga. Waxay kaa caawineysaa inaad jadwal u sameyso howlaha, maareyso faylasha, keydiso dukumiintiyada, dejiso xusuusinta, sii wad ajendayaasha, abaabusho shaqadaada. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa waxyaabaha ku jira internetka bogaggaaga Fikradda adoo adeegsanaya Embed.ly.
XIDHIIDHKA: 10 Talooyin Oo Lagu Dhisayo Nidaam Lacag-Sameyn Ah Oo Toos Ah 2022-ka
Waxay leedahay qaab rukumo afar-heer ah:
Iyada oo qiimayaasheeda qaaliga ah laga bilaabo $ 5/bishii.
Waxay bixisaa nidaam deyn xisaabeed halkaas oo aad ku kasban karto amaah adoo adeegsanaya gudbinta.
Xitaa haddii aad kaligaa shaqeyneyso ama koox dhexdeeda, Fikradda waa hal aalad oo wax lagu qoro, qorsheeyo, iyo jadwalka taxanahaaga muuqaalka. Neecow si aad u isticmaasho oo aad ula falgasho shabakadda iyo app -ka moobiilka, ayaa kaa caawineysa inaad dhammaan qoraalada iyo qorshayaasha podcast -ka hal meel ku wada jirto iyo dhammaan kuwa ku lugta leh si ay u arkaan oo ula falgalaan. Dukumentiyada iyo qoraalada iyo shaqooyinka, iyo dhammaan macluumaadka kale ee aad si fudud ugu maareyn kartid adeegsiga aaladdan.
Astaamaha Fikirka waxaa ka mid ah:
Waxay u oggolaanaysaa Iskaashiga
Dashboardka la adeegsan karo
Soo -dejinta Hawlaha
Arag Guddida Hawsha
Raadinta Horumarka Hawsha
Isdhexgalka Xisbiga Saddexaad (yacni la jaanqaadka barnaamijyada dhinac saddexaad)
Si aad u booqato degelkooda:
Buffer wuxuu kaa caawinayaa jadwalka jadwalkaaga iyo qoraallada warbaahinta bulshada ee xayeysiinta ah. waxaad otomaatig u samayn kartaa qaar ka mid ah tillaabooyinkaaga podcast -ka, istiraatiijiyadda suuqgeynta nuxurka. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay ayaa ah inaad si fudud saf ugu gasho dhejimahaaga xayeysiinta ah iyo tillaabooyinka podcast -ka waana sida ugu wanaagsan ee loo qabtay.
Qorshaha Bilaashka ah wuxuu ku siinayaa marin u helidda inaad ku xirto 3 kanaal oo bulsheed oo aad jadwal u sameysato ilaa 10 qoraal oo kanaal kasta ah.
Haddii aad u baahan tahay adeegyo dheeri ah, waxay u baahan tahay qiimo go'an oo ah $ 15/bishii taasoo imaanaysa ka dib tijaabo 14 maalmood oo lacag la'aan ah.
Waxay bixisaa qoraallo badan iyo tweets
Wadaag qaab-warbaahin badan
Taageerada macruufka, Android, mac iyo daaqadaha
2-tallaabo koonto galitaan ah oo loogu talagalay amniga horumarsan.
Jadwalka la habeeyay
Kaydinta caadiga ah
Websiteka rasmiga ah:
Kani waa software jadwalka jadwalka podcast -ka kaas oo baabi'inaya qaabkii hore ee adeegsiga emaylka iyo summadaha taleefanka si loo ballamo ballamaha, wicitaannada, wareysiyada, demos, iyo qaar kaloo badan.
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad dejiso xusuusinta otomaatiga ah ee wareysiyadaada podcast -ka iyo ballamaha kale ee xulafada ah. Intaas kaliya maahan, waxay leedahay nooc gaagaaban oo fudud oo la socda 1 xiriiriyaha jadwalka qof kasta, iyo sidoo kale hal nooc oo dhacdooyin ah, oo ay tahay inay ku filnaato la socoshada wareysiyadaada podcast -ka.
Qiimaheedu wuxuu ka bilaabmaa:
Aasaas: Waa bilaash
Qiimaha: $ 10/isticmaale bishii
Pro: $ 15/isticmaale bishii
Waxay kaloo bixisaa 14 maalmood tijaabo pro bilaash ah
Waxay u dirtaa xaqiijin iyo xusuusinta emaylka iyo qoraallada si loo wanaajiyo sicirrada bandhig la'aanta
Waxay ku darsataa waqti dheeri ah kahor ama kadib dhacdooyinka
Waxay kaa caawineysaa inaad ka fogaato shirarka daqiiqadii ugu dambeysay oo aad naftaada siiso waqti kugu filan si aad isugu diyaariso ogeysiiska jadwalka ugu yar.
Wuxuu ku muujiyaa helitaanka aagga wakhtiga martiqaadkaaga oo leh ogaanshaha aagga waqtiga caqliga leh
Waxay bixisaa waayo -aragnimo la jaanqaada astaantaada adoo ka saaraya calaamadaynta Calendly iyo habaynta astaantaada
Studio One 5 waa aalad samaynta podcast -ka oo kuu oggolaaneysa inaad duubto, soo saarto, isku qasto, sayid, oo aad ka qabato dhammaan howlaha la xiriira hal codsi. oo ka kooban Bogga Bilowga oo ku siinaya dashboard leh dhammaan heesahaaga, mashaariicdaada, iyo bandhigyadaada, oo ay ku jiraan ku -darka metadata dhammaan waxyaabihii aad abuurtay.
Waxay la timaadaa liis si fudud loo adeegsado oo kuu oggolaanaya inaad qaabeyso waxqabadkaaga oo aad beddesho bandhiggaaga mar kasta ama aad wax ka beddesho waxqabadkaaga waqtiga dhabta ah.
Waxaa ka mid ah hormuudka muujinta jiidista iyo hoos-u-dhigga ee DAW softwares-ka oo ay ku hormareen si ay ugu daraan jiidista: Loop maqal, aalado dalwaddii ah, saamayn ku-xirnaan iyo xitaa ku-biirinta fadhigaaga mid ka mid ah Browser-ka cusub ee Studio One.
Astaamaheeda waxaa ka mid ah:
Waxaa lagu daray 64-bit float resolution (Nooca Xirfadeed kaliya)
Kanaalka Cusub ee Aux
Bas Dhegaysan oo Madaxbannaan (Xirfadle Kaliya)
Muuqaalada Mashiinka Dheeraadka ah
Macluumaad dheeri ah iyo warbixin kooban, guji halkan:
Marti -gelinta Podcast -ku waa qaybtii ugu dambaysay ee taxanahaaga, in kastoo sida hore loo sheegay, laga yaabaa inaad jeceshahay inaad u isticmaasho degelkaaga si aad u martigeliso haddii aad mid leedahay. Si kastaba ha noqotee marka tirada soo dejinta ee degelkaagu kordho, waxay u egtahay inay hoos u dhigto websaydhka, tanina maahan wax u wanaagsan degel kasta maadaama ay cabsi gelin doonto dhagaystayaashaada suurtagalka ah. Si kastaba ha ahaatee waad isticmaali kartaa kuwan.
Boggan martigelinta ee podcast -ku wuxuu shaqeynayay tan iyo 2009 wuxuuna sidoo kale leeyahay 100,000+ podcasters -ka ay mudan yihiin oo ay weheliso xaqiiqda ah inay ka mid yihiin dhowr shirkadood oo ku siinaya qorshe lacag la'aan ah oo leh xisaabaadka xubnaha kooxda aan xad lahayn.
Hagaajinta qaybta otomaatiga ah
Adeegsiga qoraalka si aad uga dhigto podcast -gaaga mid si fudud loo heli karo.
Lacag -uruurinta Podcast -ka, taasi waxay kaa caawineysaa inaad sheegto kafaala -qaadayaashaada.
Barashada Sixirka. Kaas oo kuu oggolaanaya inaad qariso buuqa asalka ah ee aan la rabin ee gaarsiinta darajada sare.
Waxay leeyihiin qorshe qiimayn laga cabsado leh
Bilaash: geliyaan 2 saacadood bil kasta iyo dhacdooyinka la martigeliyo 90 maalmood.
$ 12/bishii: kor u qaad 3 saacadood bil kasta, oo lagu marti galiyay si aan xad lahayn, kayd aan xad lahayn.
$ 18/bishii: astaamaha kore, oo lagu daray gelinta 6 saacadood bil kasta.
$ 24/bishii: astaamaha kore, oo lagu daray gelinta 12 saacadood bil kasta.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad heleysaa $ 20 oo ah kaarka hadiyadda itunes markii aad is qorto.
Mid ka mid ah falanqayntii podcast -kii ugu dambeeyay iyo aaladaha martigelinta, oo leh astaamo aad u wanaagsan. In kasta oo aysan runtii xor ahayn, waxay ku siinayaan laba toddobaad oo tijaabo ah si aad go'aan uga gaarto haddii aad sii waddo adeegsiga iyo Qiimeyntoodu waxay ka bilaabmaysaa $ 19/bishii 10,000 soo dejinta bishiiba, taas oo u habboon dadka badankooda.
Waxay aad ugu habboon tahay dadka ku dheggan podcast -ka hiwaayad ahaan ama mashquul ahaan.
Ku -biirintooda cusub waxay kuu oggolaaneysaa inaad martigeliso podcast -ga gaarka ah adiga oo aan kaaga baahnayn inaad bixiso khidmad kale oo martigelin ah. Miyaanay taasi weynayn?
Features ka mid ah:
Soo gudbinta xawliga leh ee podcasts -gaaga ee ku baahsan aaladaha la xiriira.
Waxaad marti gelin kartaa podcast badan (anv public)
API iyo ciyaartoy la geli karo oo kuu oggolaanaya inaad geliso dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee podcast -ka boggaaga soo degitaanka.
Halkan ka soco:
Castos waa qalab muuqaal-buuxa leh oo isku-dhafan oo isku-dhafan oo u shaqeeya sida fidinta WordPress.
Haddii aad leedahay goob WordPress ah, waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso waa:
Tag degelkooda oo ku siinaya tijaabo 2-toddobaad oo bilaash ah.
Waxaad rakibtaa plugins WordPress
Mar kasta oo aad rabto inaad martigeliso podcast, waxaad ku dari doontaa qaybta Podcast -ka cusub ee gudaha WordPress:
Ka dib markaa waxaad u baahan doontaa inaad geliso sharraxaaddaada, waadna fiicantahay inaad tagto.
Waxay leedahay xirmo qiimo jaceyl oo jeebaysan oo ka bilowda:
Bilowga ($ 19/bishii): kaydinta aan xadidnayn oo ku habboon waxyaabaha daruuriga ah.
Kobaca ($ 49/bishii): Astaamaha kor ku xusan, oo lagu daray dib -u -daabacaadda YouTube -ka iyo barnaamijyo cajalado caado ah.
Pro ($ 99/bishii): Astaamaha kor ku xusan, oo lagu daray falanqaynta horumarsan iyo martigelinta faylka fiidiyaha.
Guud ahaan, haddii aad raadinayso podcast martigelin loogu talagalay WordPress, Castos waa doorashada ugu fiican.
Qoraal otomaatig ah - soo rog faylashaada maqalka ah iyo qoraallada qoraalka ayaa lagu darayaa dashboardkaaga daqiiqado gudahood.
Dib loogu daabaco YouTube.
Bogga podcast -ka ee la beddeli karo.
Maqaalka kor ku xusan, waxaan awoodnay inaan ku ogeysiino softwares -yada, aaladaha iyo codsiyada kala duwan ee bilaashka ah oo la awoodi karo ee aad ka heli karto internetka xilligan. Xor baad u tahay inaad doorato mid ku habboon jeebkaaga. Waxaana rajaynaynaa inaad ka heli doonto mid waxtar leh
Qeexitaanka qaamuuska podcast. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://languages.oup.com/google-dictionary-en&ved=2ahUKEwjX5rfX4qrwAhVHLBoKHRzXAFUQvecEMAB6BAgDEAQ&usg=AOvVaw3kNBXVjbAIAFeyFQVCJmJF.
15 Sahan Ilmaha Ugu Fiican Goobaha Lacagta 2022
Sida Lacag Looga Sameeyo Snapchat Sannadka 2022 | 10 Siyaabaha Sharciga ah
34 Hadiyadaha ugu Fiican $ 5 (Ama Ka Yar!) Waxaad u Heli Kartaa Kuwaad Jeceshahay 2022
Sida loogu wareejiyo barnaamijyada iPhone -ka iPhone | tan ku samee waqti yar
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee ku saabsan iibsashada iPhone -ka cusub waa fududaanta aad ku dejin karto…
Ma rabtaa xoogaa lacag ah oo dheeri ah? Waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo qaar. Waqtiyada badankood, dadku waxay bixiyaan kharash aad u badan…
25 Siyaabood oo Lacag Loogu Siinayo Si Loo Baadho Raashinkaaga 2022
Fikradda ah in lacag caddaan ah lagu kasbado iibsashada raashinka waa mid soo jiidasho leh. Oo waa xaqiiq sidoo kale!…
Waagii hore, dukumeenti waraaqo ah ayaa loo isticmaali jiray kaydinta macluumaadka. Muddo ka dib, waxaa la tusay warqaddii...
Waa imisa Qiimaha Jira?
Jira App-ka waxa uu caawiyaa qorshaynta mashruuca, daba-galka, iyo software-ka gaarsiinta ee mudnaanta siiya wax soo saarka, iyo gaarsiinta joogtada ah, iyo…